Sina 30ml 60ml 120ml tavoahangy vita amin'ny vera mahitsy vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny metaly fotsy miaraka amin'ny fonony vy Easypack
30ml 60ml 120ml tavoahangy vita amin'ny volo vita amin'ny veromanitra amam-baravarana misy satroka metaly fotsy
Ny siny fitaratra amber 30ml 60ml 120ml misy sarony dia tena mety amin'ny fanaovana tarehy sy tarehy, farmasia, aromaterapy ary solika, indostrian'ny sakafo sy zava-pisotro. Ity vera amber tena izy ity dia afaka manome anao vokatra avo lenta isaky ny mandeha.
Ny siny fitaratra amber 30ml 60ml 120ml misy sarony dia vita amin'ny vera amber tena izy. Ny vera amber dia vita amin'iny fomba iny raha tsy manaparitaka amber. Ny tombony amin'ny vera amber dia ny fanomezana fiarovana UV kely, izay tena ilaina tokoa rehefa mitahiry entana mora tohina. Miaraka amin'ilay fonony urea mainty dia manome vahaolana feno izay tsy haingo ihany fa azo ampiasaina koa.
Ny siny fitaratra amber 30ml 120ml 120ml misy sarony dia mety tsara amin'ny vokatra ao an-trano toy ny menaka, balsama, savony, vovoka, kosmetika, saron-tava, fofona ary zava-manitra, sns. Manampy amin'ny fampitomboana ny tombom-barotra koa izany, satria hijanona ho vaovao mandritra ny fotoana maharitra ny vokatrao.
Ny capacité dia 30ml, 60ml, 120ml
Namboarina tamin'ny vera tena amber.
Amber vera dia manome fiarovana UV voafetra.
Azonao atao ny mividy siny fitaratra madio misy sarony eto.
Manana habe sy endrika isan-karazany misy izahay.
MOQ dia 5 000 PCS
Previous: 1oz 2oz 4oz kobalt vera fanaovana tavoahangy fanosotra vita amin'ny vera misy rakotra plastika mainty
Manaraka: 8oz 240ml siny fitaratra miendrika saro-pantarina misy satrony plastika mainty
Toeram-panala vita amin'ny vera maso
Kaontenera fitaratra ho an'ny crème
Cosmetika tavoahangy vita amin'ny vera
Siny fitaratra ho an'ny gilasy
Tavoahangy vita amin'ny vera tantely sy veromanitra Hinds
100g 100ml loko mainty manjelanjelatra mahitsy l ...
1oz 2oz 4oz kobalta fanosotra vera manga vera ja ...
Tavoahangy fitaratra misy paompy famaohana, Tavoahangy fitaratra fitaratra misy paompy, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny menaka tena ilaina, Tavoahangy fitaratra miaraka amina famoahana paompy, Tavoahangy paompy fitaratra, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny shampoo,